ဒူးနာသူတွေ သတိပြုဖို့ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
မကြာခင်က ထိခိုက်ဒဏ်ရာ တစ်ခုခုကြောင့်ပဲ ဒူးနာနာ၊ နှစ်အတော်ကြာ အဆစ်အမြစ် ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်ပဲ ဒူးနာနာ ဒူးနာတာကို သက်သာစေဖို့ ရှောင်ရမယ့်အချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
>> အောက်ပါအချက် (၆) ချက်ကို လိုက်နာပါက ဒူးနာခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
1. အလွန်အကျွံ အနားမယူပါနဲ့။ အလွန်အကျွံ အနားယူခြင်းကြောင့် ကြွက်သားတွေကို အားနည်းစေပြီး အဆစ်နာခြင်းကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။ ဒူးခေါင်းအတွက် သင့်တော်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေရှာပြီး ပုံမှန်လုပ်ပေးပါ။ ဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုတွေက ကိုယ့်အတွက် အဆင်ပြေပြီး ဘယ်လောက်လုပ်ရင် အန္တရာယ်ကင်းနိုင်မယ်ဆိုတာကို သေချာမသိဘူးဆိုရင် ဆရာဝန် (သို့) ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးဆရာနဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပါ။
2. ချော်လဲနိုင်ချေရှိတဲ့ အခြေအနေတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ နာကြင်နေတဲ့ (သို့) မထိန်းနိုင်တဲ့ ဒူးခေါင်းက ချော်လဲနိုင်ချေများပြီး ချော်လဲရင်လည်း ဒူးခေါင်းကို ပိုမိုပျက်စီးစေပါတယ်။ အိမ်ထဲမှာ ချော်လဲနိုင်တဲ့နေရာတွေမရှိအောင် သေချာထားပါ။ လှေကားတွေမှာ လက်ရန်းတွေ တပ်ဆင်ထားပါ။ အမြင့်က တစ်ခုခု ယူချင်ရင် လှေကားတောင့်တောင့် (သို့) ခံတောင့်တောင့်တစ်ခုခု သုံးပြီး ယူပါ။
3. အဝမလွန်ပါစေနဲ့။ အဝလွန်နေသူတွေမှာ ဝိတ်လျှော့ခြင်းဖြင့် ဒူးခေါင်းပေါ် သက်ရောက်နေတဲ့ ဖိအားတွေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ကိုယ်ချမှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းအထိ ဝိတ်မလျှော့နိုင်ရင်တောင် အနည်းငယ် ပြောင်းလဲမှုလေးကနေ အပြောင်းအလဲတွေ ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
4. တောင်ဝှေး စတဲ့ လမ်းလျှောက်အကူပစ္စည်းတွေသုံးဖို့ မရှက်ပါနဲ့။ တောင်ဝှေး၊ ချိုင်းထောက် စတာတွေက ဒူးအပေါ်ဖိအားကို သက်သာစေပါတယ်။ ဒူးခေါင်းသိုင်းကြိုး၊ ဒူးခေါင်းပတ်စတာတွေကလည်း ဒူးခေါင်းကို တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းပေးပါတယ။်
5. အဆင်မပြေတဲ့ဖိနပ်တွေကြောင့် ဒူးနာခြင်းကို ပိုမဆိုးပါစေနဲ့။ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေတဲ့ ဖိနပ်ခုံက ဒူးပေါ်ကဖိအားကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဒူးခေါင်းအဆစ်ရောင်ခြင်းအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ရှူးဖိနပ်အတွင်းခံတွေကို သုံးဖို့ ဆရာဝန်တွေက ညွှန်ကြားလေ့ရှိပါတယ်။
6. ဒူးခေါင်းကို ဒဏ်မဖြစ်ပါစေနဲ့။ အရမ်းပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေက နာနေတဲ့ဒူးကို ထပ်ပြီးဒဏ်ရာရစေပါတယ်။ ပြေးခြင်း၊ ခုန်ခြင်း၊ လက်ဝှေ့အိတ်ကိုခြေဖြင့်ကန်ခြင်းစတဲ့ ဒူးခေါင်းကို ဒဏ်ဖြစ်စေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ရှေ့သို့ ဆတ်ခနဲကန်ထုတ်ခြင်း၊ ထိုင်ထလုပ်ခြင်းစတဲ့ ဒူးခေါင်းပေါ် ဖိအားများများ သက်ရောက်စေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်း မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေက ဒူးနာတာကို ပိုဆိုးစေရုံသာမက လုပ်ပုံမမှန်ရင် ဒဏ်ရာတောင် ထပ်ရစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်အတွင်းမှာ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းနဲ့ ခရီးသွားခြင်းတို့ကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲ
အခုဆိုရင် Corona Virus ပိုး တွေ့ရှိသူ ၂၀ ယောက်ထိ ရှိလာပြီဖြစ်လို့ လူတိုင်းလိုလိုမှာ သတိကြီးစွာ ထားရမယ့် အနေအထား ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ဒီကာလမှာ မဖြစ်မနေ အပြင်ထွက်ရသူတွေ အလုပ်သွားနေရသူတွေ ဈေးဝယ်ရသူတွေလည်း ရှိနေဆဲ ဖြစ်တာမို့ ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်လေးတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
● ရောဂါပိုးကူးစက်ထားသူနဲ့ ထိတွ...